ဘာကြောင့် မနက်ခင်းစောစောမှာ လိင်ဆက်ဆံ သင့်တာလဲ..? – Alanzayar
ဘာကြောင့် မနက်ခင်းစောစောမှာ လိင်ဆက်ဆံ သင့်တာလဲ..?
မနက်ခင်းစောစောမှာ လိင်ဆက်ဆံ တာက ညပိုင်းတွေမှာဆက်ဆံတာထက်ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သင်သိပြီးပြီလား။
လိင်ဆက်ဆံတာဟာ လူတိုင်းနဲ့ ကင်းကွာဖို့ မလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ။ မျိုးဆက်ပွားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လိင်ဆက်ဆံဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒီလိုဆက်ဆံကြရာမှာ အများစုကတော့ ညဘက်တွေမှာ ဆက်ဆံဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေအရဆိုရင်တော့ မနက်ခင်းပိုင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံတာက ပိုပြီး အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
အိပ်ရာက နိုးထခါစအချိန်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်တာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ပိုမိုများပြားစွာထုတ်လုပ်စေနိုင်တာမို့ အကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။ မနက်ခင်းစောစောမှာ လိင်မှုကိစ္စပြုလုပ်တာဟာ တကယ်ကို မယုံကြည်နိုင်စရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။ ၉ ချက်တောင်မှာပါ။
၁။ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတာ
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အိပ်ရာကနေ နိုးထလာချိန်မှာ အင်အားပြည့်ဝပြီး အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ပိုင်ဆိုင်နေမှာပါ။ တကယ်လို့ သင်သာ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလေ့လာချက်တွေအရ ဒီအချိန်မျိုးမှာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က လိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စေမယ့် ဟိုမုန်းတွေ အများဆုံးထုတ်လုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ Testosterone လို့ခေါ်တဲ့ ဟိုမုန်းတွေ အများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်နေမှာဖြစ်သလို လူကလည်းအားအင်ပြည့်ဝနေတာမို့ လိင်အင်္ဂါတောင်မတ်မှုကလည်း ကြာရှည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ခင်းက အကောင်းဆုံးလို့ဆိုတာပါ။
မနက်ခင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ အမျိုးသားရေ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးမှာ “cuddle hormone” လို့ခေါ်တဲ့ Oxytocin ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုး ပိုမိုထွက်ရှိလာပြီး အပြန်အလှန်ဆွဲဆောင်မှုကို ပိုမိုမြင့်တက်စေပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးလုံး Sexy ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
မနက်ခင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းရှင်းနေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။ မနက်စောစောမှာ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာကိစ္စကို ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး stress hormone လယ်ဗယ်ကို လျော့နည်းသွားစေမှာမို့ပါ။
မနက်ခင်းပိုင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာကျင်မှုဝေဒနာကို သက်သာစေတဲ့ Endorphins တွေကို ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဓာတုဗေဒဓာတ်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ကျန်းမာနေမှာပါ။
မနက်ခင်းပိုင်းမှာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုမျိုး အကျိုးရှိစေပါတယ်။ တစ်မိနစ်ကို ၅ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာ မနည်းမနောပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ ကြာမယ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီ ၁၅၀ နဲ့အထက် လောင်ကျွမ်းစေနိုင်မှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က အချိန်ကြာလာလေလေ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားလာလေလေဆိုတာကိုလည်း သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ ဦးနှောက်ကို ကောင်းမွန်စေတယ်
ဦးနှောက်ကိရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် မနက်ခင်းစောစောလိင်ဆက်ဆံခြင်းက နည်းလမ်းကောင်းတစ်မျိုးပါ။ လေ့လာချက်တွေအရ Dopamine လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ ဟိုမုန်းတွေကို ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာမို့ စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုးတက်စေတာပါ။
၈။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးတယ်
ဗီတာမင် C က သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဘက်တီးရီးယားလေးတွေ သဘာဝအတိုင်း ပိုပြီးအားကောင်းလာဖို့ဆိုရင်တော့ မနက်ခင်းမှာ လိင်ဆက်ဆံပေးတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
သင်က ပုံမှန် မနက်ခင်းတွေမှာ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်တယ်ဆိုရင် လူတကာအမြင်မှာ နုပျိုးလန်းဆန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အသွင်အပြင်မျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းလိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ထွက်ရှိလာတဲ့ Oxytocin နဲ့ Beta Endorphins တွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး နုပျိုသလိုဖြစ်နေတာပါ။ Crd Hello Dr
Previous Article သတင်းထူးကြီး see more…
Next Article မအလမ်ား ယုတ္မာတာ ကမ္းကုန္ပီ အန္ယူဂ်ီ ပရိုဖိုင္ခ်ိန္းထားသူမ်ား အျပင္ထြက္ရင္ အထူးသတိရွိၾကပါခင္ဗ်ာ..a